Posted by ashin kusalasami on January 04, 2010
We must shape our own destiny ဟူသော စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ကိုယ်ကိုတိုင် ဖန်တီးပုံဖော်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကောင်းတာပဲပုံဖော်ဖော်၊ ဆိုးတာပဲပုံဖော်ဖော် ရလဒ်ကား သေချာနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရလဒ်သည်ပင် ကိုယ့်သမိုင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လူ့ဘ၀ဟူသည် ရေပွက်ပမာတစ်ခဏသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခဏသာ အချိန်လေးသည်ပင် မိမိနှင့် လောကကြီးတစ်ခုလုံး အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လုံလောက်သောအချိန်ဖြစ် နေပါတယ်။ တိုတောင်းတဲ့အချိန်လေးနဲ့ ဘ၀သမိုင်းကို အကြီးအကျယ် ရေးထိုးခဲ့သူတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အသက် ၃၃-နှစ်သာ ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် သူရေးခဲ့သောသမိုင်းကား ယနေ့ထိ ရှင်သန်နေဆဲ၊ ပြိုင်ဘက်ကင်းဆဲပင် ရှိနေပါသေးတယ်။ နောင်အနာဂတ်များစွာထိ သူ့ရေးခဲ့သော သမိုင်းကား ငှါးငှါးစွင့်စွင့် ပွင်းလန်းနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ဘ၀ဖြစ်ဖြစ်၊ တိရစ္ဆာန်ဘ၀ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသက်မဲ့သစ်ပင်စသည်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာမဆို မွေးဖွား ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းတို့ဖြင့် ပိုင်းခြားကန့်သတ်ခံထားကြရတယ်။ ဒီကန့်သတ်ထား တဲ့ဘောင်နှစ်ခုကြားမှ ဘယ်အရာမှာ ရှောင်နေလို့ မရပါဘူး။
လာခြင်းကောင်းဖို့ လိုအပ်သလို၊ ပြန်ခြင်းကောင်းဖို့လဲ ကောင်းဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ “သင်လာသောအခါ လူအများ ပြုံးပျော်ကြ၍ သင်ပြန်သောအခါ လူအများ ၀မ်းနည်းကြရတဲ့သူမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုကြောင်း” မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေတို့၊ အကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်အနေအထားကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့် ကြစေလိုပါတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ သစ်ရွက်လေးတွေ၊ ပန်းပွင့်လွှာလေးတွေ ကြွေကျခြောက်နွမ်းနေတာကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့် မယ်။ ထိုသစ်ရွက်လေး၊ ပန်းပွင့်လေးတွေဟာ ပင်စည်ကြီးမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှစိုက်ပျိုးထားသော အပင်က အပွင့်လေးများကို သတိပြုမိချင် ပြုမိနိုင်သော်လည်း တောကြီးမျက်မဲထဲမှ ပန်းပွင့်၊ သစ်ရွက်လေးများဆိုလျှင် ဘယ်သူမှ သတိပြုမိနိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပေဘူး။ ထိုသစ်ရွက်ပန်းပွင့်လေး များလို လူမသိသူမသိဖြင့် ရှင်သန်လာခဲ့ရပြီး သူမသိသူမသိဘ၀ဖြင့်ပင် သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားကြသူများ လောကတည်းဟူသော တောကြီးထဲမှာ အများကြီးပါပဲ။ သူတို့ မွေးဖွားလာ၍ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်မလာသလို သေဆုံးသွား၍လည်း မည်သူမျှ ဂရုစိုက်နေစရာအကြောင်းမရှိချေ။
မိတ်ဆွေတို့၊ အကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။ လူ့လောကကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးကြောင်း ဘယ်လိုသက်သေတွေ ထားရစ်ခဲ့ကြမလဲ။ သင်တို့၊ အကျွန်ုပ်တို့ ထားခဲ့တဲ့သက်သေတွေက သင်တို့၊ အကျွန်ုတို့ရဲ့ သမိုင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ ထားခဲ့တဲ့ သက်သေတွေကို ကြည့်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းကို အကဲဖြတ်ရစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ဘယ်လိုသက်သေတွေ ထားရစ်ခဲ့သင့်လဲ။
ကောင်းတာတွေ မွန်မြတ်တာတွေ သန့်စင်တာတွေ ထားရစ်ခဲ့မလား၊ ဆိုးတာတွေ အော့ကြောလန်စရာတွေ အော့နှလုံးနာစရာတွေ ထားရစ်ခဲ့မလား။ ဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းတာဖြင့် သက်သေပြလျှင် သင့်အား လူအများက ချီးမွမ်းထောမနာပြုကြလိမ့်မယ်။ မတွေ့ဖူးသူများ က တသသနဲ့ တွေ့လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ဤကမ္ဘာလောကကို သင်ကျောခိုင်း သွားခဲ့ရလျှင်တောင်မှ သင့်အား ၀မ်းနည်းတသ ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်။ သင့်အား နမူနာအဖြစ်ထားရင်း သင့်နာမည်ကို မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာထိ သယ်ဆောင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် ဘယ်သူကမှလဲ တားမြစ်လို့ ရလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်နာမည် တိမ်ကောအောင် ဘယ်သူမှ ဖုံးဝှက်လို့ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သေသွားသော် သင့်ကျဆုံးမှုအတွက် အားလုံးက ၀မ်းနည်းတသဖြစ်နေကြမှာ သေချာပါတယ်။
မကောင်းတာ၊ မရိုးသားတာဖြင့် သင် သက်သေပြခဲ့လျှင်ကော? ဒါလဲ သင့်သမိုင်းဟာ ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများဟာ သင့်အား အော့နှလုံးနာကြလိမ့်မယ်။ သင်သေသွား၍ သင့်နာမည် ကျန်ခဲ့နိုင် သော်လည်း သင့်ကဲ့သို့မဖြစ်အောင် အနာဂတ်မျိုးဆက်များကို သတိပေးတားမြစ်ဆုံးမနေကြပါလိမ့်မယ်။ သင်သေသွားသော် သင့်ကျဆုံးမှုအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရင်တောင်မှ ၀မ်းနည်းမှုမဖြစ်မှာက သေချာပါတယ်။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကို ဥပမာလေး ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာ လီဆောင်းဦးဆိုတဲ့ ခွေးမလေး တစ်ကောင်ရှိပါတယ်။ ခွေးလေးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ိုင်းပြီးကျွေးကြ၊ စကြနဲ့ အားလုံးက ချစ်ကြပါတယ်။ ၃-လလောက် ကြာသွားတော့ ခွေးလေးဟာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါ တယ်။ အဆောင်အားလုံးဟာ ခွေးမလေးအတွက် ၀မ်းနည်းတသဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ ခွေးမလေးဟာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ဘ၀ရောက်ခဲ့ရပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့မေတ္တာကို ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူဟာ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ သမိုင်းကျန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူလာတုန်းက ၀မ်းသာ၊ သူရှိနေတုန်းက ပျော်ရွှင်၊ သူထွက်ခွါသွားတော့ ၀မ်းနည်းကြရပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သူလာတုန်းကလဲ အော့ကြောလန်၊ သူရှိနေတုန်းမှာလည်း စိတ်ဆင်းရဲ၊ သူထွက်ခွါသွားတော့ စောစောက လီဆောင်းဦးလေး ဆုံးသွားသလောက်တောင် လူတွေ ၀မ်းမနည်းကြပါ ဘူး။ အားလုံး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာတောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ၀န်ကြီးချုပ် ဆိုသူ လူယုတ်မာ စိုးဝင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူသေသွားတဲ့သတင်းကို ကြားရတော့ ကျွန်တော်တို့ အဆောင် မှာ သတိထားကြည့်တော့ လီဆောင်းဦးသေတုန်းကလောက် ၀မ်းမနည်းကြတာတွေ့ရတယ်။ ဒါက ဘာကို ပြနေသလဲဆိုတော့ သမိုင်းတွင်အောင် လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာ ရိုးသားမှုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ ရိုးသားမှုမရှိတဲ့ သမိုင်းဟာ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ သမိုင်းလောက်တောင် မခန့်ငြားဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါပဲ။ ခွေးမလေး လီဆောင်းဦးလောက် သမိုင်းမှာ မလှပခဲ့ကြတဲ့ စိုးဝင်းလို လူမျိုး သင်ဖြစ်ချင်ပါသလား။
အလုပ်ရဲ့အတိုင်းအတာ ပမာဏမျှ သင့်သမိုင်း တင်ကျန်နိုင်ပါလိမ့်မယ့်။ အချို့က မိသားစုအတိုင်းအတာ ပမာဏမျှ၊ အချို့က တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာ၊ အချို့က ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာ…….နာမည်များ ချန်ထားရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိသားစုအတိုင်းအတာပမာဏမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့လျှင် သင့်မိသားစုက သင့်အား မျိုးဆက်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် နှစ်ခုစသည်တိုင်အောင် အမှတ်တရရှိနေလိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက် သင်လုပ်ဆောင်လျှင်ကား တစ်တိုင်းပြည်လုံးက သင့်အား အမှတ်ရနေလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာထိ ကျယ်ပြန့်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့လျှင်ကား ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ သင့်အမည် ထည့်သွင်းခံထားရလိမ့်မယ်။ သင့်နာမည်သည် သင်ထားခဲ့သော အခြေအနေများအတိုင်း ကောင်းရင်ကောင်းသလို၊ ဆိုးရင်ဆိုးသလို နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိနေလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သမိုင်းရဲ့ နိယာမတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးနေ၀င်း၊ ဦးစောမောင်၊ ဦးသန်းရွှေ၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ သိန်းဖေမြင့်၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်စိုး၊ ……..မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့နာမည်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နာမည်တွေ ကျန်ခဲ့ပုံချင်းကတော့ အများကြီး ကွာခြားလှပါတယ်။ အချို့နာမည်များသည် အော့နှလုံးနာစရာများ၊ နာကျည်းစရာများ၊ အရှက်ရစရာအဖြစ်များရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပြီး အချို့နာမည်များကတော့ ဂုဏ်ယူစရာ၊ ၀င့်ကြွားစရာ၊ အားကျစရာများရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်နေပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းလိုပဲ နောင်အနာဂတ်သမိုင်းမှာ ထင်ကျန်ရစ်မယ့်သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာများကို လှန်ကြည့်မိလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အရှက်ရစရာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ရိုးသားစွာ အလုပ်မလုပ်ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်း ပြည်ကို လိမ်တယ်။ ညာတယ်။ ဖြီးတယ်။ ကွေ့တယ်။ ကောက်တယ်။ ညစ်ပတ်တယ်။ ယုတ်မာတယ်။ နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်ဟာ နေ၀င်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရတာထက် ခွေးသေကောင် ပုပ်ကို ကြည့်ရတာဟာ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရေးခဲ့တဲ့၊ သူတို့ရေးနေတဲ့ သူတို့ရဲ့သမိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အသံကြားလျှင် ကြက်သီးမွေးညှင်းထရတယ်။ အားကျမိတယ်။ လွမ်းဆွတ်မိတယ်။ တမ်းတမိတယ်။ မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ ကြည်ညိုမိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရတာ ကုသိုလ်တွေ တိုးပွားရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ရိုးသားမှုရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ရိုးသားမှုနဲ့သမိုင်းကို ရေးခဲ့ကြ သူတိုင်းဟာ ဒီလိုပါပဲ သူတို့သမိုင်းစာမျက်နှာများဟာ လှပကျက်သရေရှိနေပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေတို့ ဘယ်လိုသဘောရလဲ? ဘယ်လို သမိုင်းများ ရေးခဲ့ကြမလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်လောက် ကြီးကျယ်အောင် မရေးနိုင်လျှင်တောင်မှ နေ၀င်းတို့လို သမိုင်းမျိုး မရေးဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆပါတယ်။
ရည်ညွှန်းချက်…..ယခင်က တင်ဆက်ဖူးသောဆောင်းပါးအဟောင်းကို လွတ်လပ်ရေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် ပြန်လည်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားမှုဖြင့် သမိုင်းတွင်ရစ်ခဲ့ကြသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်များအား ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။